mairie-antananarivo – FPMA – Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana – Cua
FPMA – Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana – Cua
administrateur 21 martsa 2018 Commentaires fermés
Nihaona tamin’ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàana Analakely ny Talata 20 Martsa 2018 ny Delegasionina iray avy any Frantsa avy amin’ny Federasionina Protestanta ao Frantsa nahitana ny Sekretera Jeneraly Georges Michel sy ny Pastera Brice Deymie misahana manokana momba ny fitahizana aram-panahy ny voafonja ary ny Filohan’ny Fiangonana Protestanta Malagasy any Andafy (FPMA) Roland Ratiarison.
Fantatra fa hisy ny fanamarihana ny tsingerintaona faha 200 nahatongavan’ny Misionera voalohany teto Madagasikara ary zava-dehibe ao anatin’izany koa ny nahavoadika ny Baiboly amin’ny teny Malagasy. Nandritra ny fihaonana tamin’ireto vahiny ireto no nilazan’ny Ben’ny Tanànan’Iarivo Lalao Ravalomanana fa tsy afaka misaraka ny aram-panahy sy ny ara-nofo. Tsy tokony handalo fotsiny izany fotoana amin’ny volana Septambra 2018 izany araka ny fanazavana noentin’ny Filohan’ny FPMA Roland Ratiarison fa sehatra iray ahafahana maneho ny fiarahamientan’ny samy Kristianina izay miaina ny Tenin’Andriamanitra hitondra fanarenana ny Firenena Malagasy.
Ankoatra izay dia hotanterahana eto Antananarivo koa ny Fikahonan-doha lehibe ho an’ireo mpitaiza aram-panahy ireo voafonja aty amin’ny faritr’I ny Ranomasina Indiana. Fantatra koa nandritra ny fihaonana tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna fa hitarika ny Delegasionina avy amin’ny Federasionina Protestanta ao Frantsa amin’izany volana Septambra izany ny Filohany ny Pastera Francois Clavairoly.